Ciidamo goodadsan oo la wareegay xaruntii shirka Jowhar | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ciidamo goodadsan oo la wareegay xaruntii shirka Jowhar
Ciidamo Milateri ah ayaa maanta la wareegay xarunta shirka magaalada Jowhar, iyagoo diiday in gudaha loo galo, lagana baxo xarunta oo ay sidoo kale degan yihiin ergadii ka qeyb galeysay shirka maamul u sameynta Hirshabeelle.
Sida ay sheegayaan wararka aanu ka heleyno Jowhar ciidamadan oo wata gaadiid dagaal ayaa la sheegay inay ku heyb yihiin Musharaxa Madaxweyne kuxigeenka Xasan Cali Taakow, kaasoo shir jaraa’id oo uu goor dhow ku qabtay Jowhar ku sheegay in la joojiyay shirka.
Qaar ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka ayaa sheegay inay ka soo hor-jeedaan fara gelin dowladda ku wado doorashada Hirshabeelle, isla markaana Musharaxiin Madaxweyne kuxigeen ka yimid Muqdisho lagu wargeliyay inay isaga soo baxaan shirka oo aanay is sharixi karin.
Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid ayaa ka mid ahaa Musharaxiinta u taagnaa Madaxweyne kuxigeenka, waxaana la sheegayaa in dowladda ku wargelisay inuu isaga soo baxo Jowhar, isla markaana aanu is sharaxi karin.
Cabashada ka soo yeereysa Musharaxiinta qaar ayaa la xiriirta inay jiraan Musharaxiin gaar ah oo ay wadato dowladda, gaar ahaan Madaxtooyada, waxaana lagu eedeeyay in doorashadii xalay ee Guddoonka Baarlamaanka inay door ku lahaayeen xubnihii la doortay.